Dowladda iyo dalladaha waxbarashada oo isla qaadaya Imtixaanka shahaadiga ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kulan ay shalay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ku yeesheen wasiirka waxbarashada Soomaaliya, Khadra Bashiir Cali iyo mas’uuliyiinta dalladaha ahliga ee waxbarashada ayaa la iskula afgartay in dhaqangeliyo go’aan sanadkii hore ay labada dhinac gaareen oo ahaa sanadkaan la mideeyo imtixaanka ardayda Form 4-ka.
Kulanka ayaa waxa uu muhiimadiisa ahaa sidii Wasaaaradda iyo Daladaha ay sanadkaan u qaadi lahaayeen Imtixaan Qaran oo ka dhaca dalka, taasoo ay soo dhaweeyeen Daladaha Waxbarashada dalka.
Dood dheer oo dhexmartay madaxda cusub ee wasaaradda iyo mas’uuliyiinta dalladaha ayaa waxaa markii dambe la islagartay in la saaro guddo ka kooban 12 xubnood, kuwaasoo 8 ka socdaan Dalladaha Waxbarashada, halka 4 kale la socdaan Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Guddiga ayaa si wadajir ah uga wada shaqeynaya sidii loo hirgalin lahaa imtixaan Qaran oo laga qaado dalka intiisa badan, iyadoo imtixaankaas dhicin doona dabayaaqada May ama June 2015.
Wuxuu guddigaani mas’uul ka noqon doonaa dejinta Imtixaanka laga qaadayo ardayda ka qalinjibineysa dgsiyada sare ee hoos yimaada dallada Waxbarashada.
Wasiir Khadra oo hadashay ayaa waxey ka codsatay Daladaha Waxbarashada iney u hogaansamaan lana shaqeeyaan Wasaarada Waxbarashada, si dalka loo gaarsiiyo hormar dhanka tacliinta ah.
Wasiirada ayaa carrabka ku adkeysay in Wasaaradda Waxbarashada aysan cidna u lug xirnaan doonin, isla markaan sidii lagu heshiiyay ay qaadi doonto Wasaarada imtixaan qaran oo dalka oo dhan ah.
Dhanka kale, Drs Khadra Bashiir Cali ayaa waxay balan qaaday in Wasaaradda Qiima dhimis ku sameyneyso sanadkaan lacagta Shahaadada ardayda uga qaadan jireen Wasaaradda, sidaas si la mid ahna ay ka codsatay Daladaha inay qiima dhimis ku sameeyaan, maadaama Caruurta Soomaalida ah aysan awoodin inay iska bixiyaan lacagaas.
Dalladaha ayaa ardayda Shahaadada dugsiga sare ka qaada $30 dollar, iyadoo wasaaradda waxbarashada oo shahaadada dallada badesha ay mar kale ka qaaddo $30 dollar oo kale.
Daladaha Waxbarashada oo qaarkood ka biyo diidsanaayeen mideynta imtixaanka ayaa markii dambe soo dhaweeyey go’aanka dowladda Soomaaliya.
Dallahada ayaa balan qaadayn inay la shaqeyn doonaan Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ay ku qanacsan yihiin in dalka laga qaado imtixaan loo wada dhan yahay.
Imtixaankan oo ku ekaan doonaa Koonfruta Soomaaliya ayaa wuxuusan gaari doonin magaalooyinka Alshabaab maamulaan, iyadoo la ogyahay in magaalooyinkaas ay ku yaallan dugsiyo hoostaga Dalladaha Waxbarashada Ahliga ah.